Taariikhda Kooban ee Xiddiga xulka qaranka Soomaaliya Mahad Yare – Gool FM
Taariikhda Kooban ee Xiddiga xulka qaranka Soomaaliya Mahad Yare
(Muqdisho) 26 Abril 2020. Ina Muxudiin Xaaji, malaha waa magac idinku cusub, maya ee idin kuma cusba ee qaab qoraalka ayaa ka geddisan sida aad taqaannay.
Mahad Yare, xiddiggii hore kooxda Heegan, laacibka qaranka, kubbad sameeyaha aan la loodin, qannaaska midig, geesiga guusha u sameysan, haddaba waa kuma Mahad Yare?
Magaciisa buuxa waa Mahad Muxudiin Xaaji (Mahad Yare) wuxuu dhashay sanadkii 1996-kii, waxa uu ku dhashay degmada Yaaqshid gaar ahaan xaafadda Towfiiq, isla xaafadaas ayuu ku soo barbaraay ciyaaryahan Mahad yare.
Da’diisa: 24-sano jir
Dhirirkiisa: 1.90 M
Booska: Khadka Dhexe
Heerkiisa Ciyaarista kubadda cagta:-
Ciyaarista kubadda cagta ayuu wuxuu ka soo bilaaway heera xaafadeed isagoo kooxdii uu yaraantiisa u dheeli jiray ay aheyd kooxda Qaran FC oo ka dhisneyn xaafada towfiiq, lambarka uu u watayna waxa uu ahaa 16.
Sanadkii 2010-kii ayuu ka soo dalacay heerka xaafadeed isago ku soo biiray kooxda kubadda cagta Midnimo FC oo xilligaas qeyb ka ahayd kooxaha ka dheelayay horyaalka heerka saddexaad ee C-da, wuxuu kaliya la joogay xili ciyaareedkaas, isagoo kooxda Midnimo u dhaliyay 8-gool wuxuuna ka mid ahaa xiddigaha u tartamaayey kabta gooldhalinta horyaalka heerka 3-aad ee dalka.
Dhammaadkii sanadkii 2010-kii ayuu ku soo biiray kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan isagoo xiligaas lagu soo dhaweeyay lambarka 4-aad ee kooxda, sanadkii 2013-kii ayaa laga badalay lambarka 4-aad isagoo gacanta laga saaray lambarka 13-aad ee kooxda Heegan.
Mahad Yare Sanadkii 2015-kii ayaa markale laga siibay lambarka 13-aad isago loo dhiibay lambarka uu ku caan baxay No 8-aad ee kooxda.
Ciyaaryahan Mahad Muxudiin Xaaji nasiib uma yeelan inuu garoon u galo muddo labo sano ah isago ka mid ahaa xiddigaha Keydka u fadhiyay kooxda Heegan, balse kulankiisii ugu horreyay ee kooxda Heegan uu u safto wuxuu ahaa sanadkii 2012-kii ciyaar ay la dheeleysay kooxdiisa Heegan Naadiga Elman, kulankaasoo ku soo dhamaaday 2-1 ay guusha ku raacday Wiilasha Heegan.
Kooxda Heegan wuxuu kula guuleystay hal horyaalka kaas oo ahaa sanad ciyaareedkii 2014-15, sido kale koobab munaasabado ayuu kula guuleystay Naadiga Heegan.
Xiddigan ayaa goolal badan u dhaliyay kooxda Heegan horyaalka iyo tartamada kale waxaa kamid ah tartankii Cecafa ee ka dhacaayey dalka Tanzania ayuu gool qurux badan u dhaliyay kooxdiisa Heegan, ciyaar qeyb ka aheyd Cecafa Kagami Cup.
Noloshada Qaaska ah:-
Mahad Yare waxaa la dhalatay 2-wiil iyo 7-gabdhood, mahad waxaa ka weyn labo gabdhood iyo hal wiil, waa shaqsi afaraad ee qoyska Aabbe Muxudiin Xaaji.
Dhanka iyo Wax Barashada:
Dhanka iyo waxbarashada waa xiddiga dhammeeyay Dugsiga sare, isagoo ka soo bilaaway waxbarasha iskoolka lagu magacaabo Towfiiq 1 ee ku yaalay isla xaafadda uu ku noolaa, wuxuuna nasiib u yeeshay inuu iskoolkii uu ka bilaabay heerka waxbarasha kuna dhameeyo heerka dugsiga sare, laakiin nasiib xumo ma uusan haleylin inuu dhigto Jaamacad.
Heerka Xulka Qaranka:-
Markii ugu horreysay ee qaranka loogu waco waxay aheyd sanadkii 2015-kii xilligaas ay ka qeyb galayeen isreeb-reebka Olympic-ada adduunka, xiddigan ayaa tartammo badan ku matalay xulka sida Cecafa, Isreeb-reebka koobka adduunka, Chan Cup-iyo bariga iyo bartamaha Africa.
Waxaa qoray: C/fitaax C/rashiid Abuukar (Nani)
Kooxda Paris Saint-Germain oo Manchester United u soo bandhigtay labo ciyaaryahan si ay uga hesho Paul Pogba
Borussia Dortmund oo isku diyaarinaysa inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta xiddig ka tirsan Kooxda Arsenal